ဦးနှောက်ကလေးသံချေးချွတ်ကြစို့ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on October 15, 2012 at 11:07 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးကံကောင်းကြပါတယ်။ သင်ဤစာကိုဖတ်နေနိုင်ပါက သင်လည်းကံကောင်းသည့်အထဲတွင်ပါပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဦးနှောက်တစ်စုံကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါပဲ။ ဒီဦးနှောက်ကိုအသုံးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ဘ၀တက်လမ်းရှာကြရပါသည်။ ပြဿနာတွေဖြေရှင်းရသည်။ မှတ်သားစရာတွေမှတ်ကြသည်။ ပြောင်မြောက်သည့်အနုပညာလက်ရာတွေ၊ သီချင်းတွေ၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ ကမ္ဘာကြီးအားရိုက်ခတ်လွှမ်းမိုးသည့်အတွေးအခေါ်တွေအားလုံးဟာ သည်လူသားဦးနှောက်ကိုအသုံးပြုပြီး ထွက်ပေါ်လာကြသည်။
တစ်ချိန်တုန်းကထင်ထားခဲ့သည်ကအရွယ်ရောက်ပြီးလူတစ်ယောက်ရဲ့ဦးနှောက်ဟာအပြည့်အစုံဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်လို့နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတော့ဘူးဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းတွေ့ရှိချက်များအရ ဥာဏ်ကစားရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းညွှန်ပြနေကြပါတယ်။ မသုံးဘဲကြာလာလျှင် သံချေးတက်လာတဲ့ဓါးလို ဦးနှာက်ဟာလဲသုံးလေလေ ထက်မြက်လာလေလေသဘောရှိပါတယ်။ အများတကာသိပြီးသား ဟာသလို ဦးနှောက်တွေတန်းစီပြီးရောင်းတဲ့နေရာမှာ တို့မြန်မာဦးနှောက်က ဈေးအကြီးဆုံး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်ခါမှမသုံးရသေးတဲ့အသစ်စက်စက်မို့တဲ့လေ။ အာရုံကြော သုတေသနလောကမှာခေတ်စားတဲ့ use it or loose it သုံးရင်သုံး၊ မသုံးရင် ဆုံး ဆိုတဲ့သီအိုရီကလည်း ဒါကိုထောက်ခံပေးထားပါတယ်။
လူအများစုကြီးကတော့ဦးနှောက်သုံးရမှာဝန်လေးတတ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားဘ၀မှာ စာကျက်ရမယ်၊ သင်္ချာတွက်ရမယ်၊ စာစီစာကုံးရေးရမယ်ဆိုရင် မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ ရေတစ်တိုင်ကီသွားထမ်းဆိုထမ်းလိုက်ချင်တယ်။ တစ်အိမ်လုံးတံမျက်စည်းလှည်းဆိုရင်လှည်းလိုက်ချင်တယ်။ စာမလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ဦးနှောက်ကိုအသုံးပြုရတာဟာ ကာယကိုအသုံးပြုရတာထက်ပင်ပန်းလို့ပါပဲ။ တစ်နာရီနှစ်နာရီလောက် ထိုင်ပြီး စိတ်ကို တစ်စုံတစ်ရာထဲမှာနှစ်မြှုပ်ချုပ်နှောင်ထားရတာ အင်မတန်ပင်ပန်းတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကြောင့်ပါ။ အလုပ်တစ်ခုကိုမလုပ်ရသေးဘဲနဲ့ စိတ်ကကြိုတင်ပြီး ပင်ပန်းမှာ၊ ကျရှုံးမှာ စတာတွေကိုပူပန်နေတတ်လို့ပါပဲ။
Virgil Garnett Thomson ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ကိုယ်မလုပ်ဖူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုအနည်းဆုံးသုံးကြိမ်တော့ စမ်းကြည့်ပါလို့ပြောတယ်။ “အဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ။ ။ ဒုတိယအကြိမ်စမ်းလုပ်ကြည့်တာကတော့ အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတာသိအောင်ပါ။ တတိယအကြိမ်လုပ်ရင်တော့ အဲဒါကို ကိုယ်ရေရှည်နှစ်သက်နိုင်မှုရှိမရှိသိအောင်လို့လုပ်ပါ” တဲ့။ ဒီစကားလေးဟာ ကျွန်တော်လူငယ်ဘ၀ကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုသွားသတိရစေပါတယ်။ တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ပန်းရံအလုပ်သမားတွေနေပူကြီးထဲလုပ်နေကြတာပူလိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်းလို့တွေးမိတယ်။ ကိုယ်ကအရိပ်ထဲကနေပြီးစဉ်းစားမိနေတာကိုး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တစ်ကယ်လက်တွေ့ဝင်လုပ်ရတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်ထင်သလောက်မပူဘူး ဆိုတာနားလည်လာခဲ့တယ်။ နေရောင်အောက်ကိုဝင်စအချိန်မှာသာ အပူဒဏ်ကိုပြင်းပြင်းခံစားရပေမယ့် ကြာလာတဲ့အခါ ခံနိုင်ရေတက်လာပါတယ်။ အလုပ်ထဲစိတ်ရောက်သွားတဲ့အခါ ပူလို့ပူမှန်းတောင်သတိမရတော့ပါဘူ။
ဦးနှောက်ကိုသုံးပြီးအလုပ်လုပ်မယ့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ဦးနှောက်ကိုစွမ်းရည်တိုးမြှင့်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျစရာမလိုဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ အခုဖော်ပြသွားမယ့် အလေ့အထလေးများဟာ သင့်ရဲ့ ပျင်းရိနေတဲ့စိတ်၊ သမရိုးကျ ငြီးငွေ့ဖွယ်ဘ၀နေနည်းထဲ ခဏတဖြုတ်လွတ်မြောက်သွားစေမယ်ဆိုရင်တောင်အမြတ်ပါပဲလေ။ ကျွန်တော်တော့ အခုပဲစပြီးစမ်းကြည့်နေပါပြီ။
၁။ ပဟေဠိနှင့်ဥာဏ်စမ်းမေးခွန်းများဖြေပါ။ ဒီဥပမာကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကို brainteasers လို့ခေါ်တာပေါ့။
၂။ လက်နှစ်ဖက်လုံးအသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုပျိုးထောင်ပါ။ ကိုယ်မသန်တဲ့လက်နဲ့ သွားတိုက်တာ၊ ဆံပင်ဖြီးတာ စတာတို့လုပ်ကြည့်ပါ။ ဇွန်းခက်ရင်းကိုင်တဲ့အခါ ညာသန်ကဘယ်သန်လိုပြောင်းကိုင်ကြည့်ပါ။
၃။ မရေရာခြင်းကိုခံယူပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ၀ိရောဓိတွေ paradox နဲ့ အမြင်အာရုံလှည့်စားတတ်တဲ့အရာတွေ optical illusion တွေကိုနှစ်သက်နိုင်အောင်သင်ယူပါ။ စာဖတ်သူလက်တွေ့စမ်းကြည့်လို့ရအောင်အောက်ပါ ၀ိရောဓိလေး (liar paradox) ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်က “ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိမ်ပြောတတ်ပါတယ်” လို့ဆိုလာရင် သူတစ်ကယ် အမှန်တရားကို ပြောနေတာလား။ လိမ်ပြောနေတာလား။ သင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။
နောက်တစ်ခုက Archer's paradox လို့ခေါ်ပါတယ်။ “လေးသည်တော်တစ်ဦးသည် ပစ်မှတ်ကိုထိမှန်အောင်ပစ်ဖို့ဆိုပါက ပစ်မှတ်တည့်တည့်ကိုချိန်၍မရ။ ပစ်မှတ်၏ဘေးဘက်နည်းနည်းရွှေ့ချိန်ရ၏”။ မြန်မာစကားပုံ “ဒူးလောက်တင်မှရင်လောက်ကျ”ဆိုတာ ဒီဝိရောဓိနဲ့တစ်ထပ်တည်းပါပဲ။ သမရိုးကျကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပစ်မှတ်ကိုတည့်အောင်ချိန်မှထိမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရူပဗေဒသဘောတရားတွေ၊ လေတိုက်ခတ်နှုန်း စတာတွေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မှန်နေတာတွေ့ရမယ်။ ဒါကြောင့်ဒီလိုဝိရောဓိတွေကို ဘာကြောင့် ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိစေပါတယ်။ optical illusion ကလည်း မျက်လုံးကမြင်ရတာဟာအမြဲတမ်းအမှန်တရားမဟုတ်တတ်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့တတွေအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေအောင်ပညာပေးနေပြန်ပါတယ်။
ရှစ်တန်းမှာကတည်းက The standard Hering illusion (1861) ကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ကြပါပြီ။
သူ့နောက်ကွယ်ကဘာကြောင့် ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အခါ ဦးနှောက်သန်စွမ်းမှထက်မျက်မှ မျက်လုံးကပြောတဲ့အာရုံမှားတွေကိုချေဖျက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပိုခိုင်လုံလာပါတယ်။
၃။ သင့်အာရုံငါးပါးထဲက တစ်ခုခုကို ပိတ်ဆို့ကာအလုပ်လုပ်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ မျက်လုံးကိုအ၀တ်စဖြင့်စည်းကာထမင်းစားကြည့်ခြင်း၊ နားထဲဂွမ်းဆို့ထားခြင်း၊ မျက်လုံးပိတ်ပြီးရေချိုးခြင်း။ စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ခပ်ကြောင်ကြောင် အရေမရအဖတ်မရအလုပ်တွေလို့ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညဖက်ရေချိုးနေရင်း ရေချိုးခန်းမီးကို အပြင်ကတစ်ယောက်ယောက်က ပိတ်သွားတာမျိုးကြုံဖူးကြပါသလား။ မီးမှောင်မှောင်ထဲမှာ စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးမျက်နှာမှာပါ ဆပ်ပြာတိုက်ထားရင်း ရေခွက်(သို့) ရေပန်းခလုပ်ကို လိုက်ရှာရတာဘယ်လိုနေပါသလဲ။ ပိုအရေးကြီးတဲ့ဥပမာပြရရင် ဓါတ်လှေကားစီးရင်းမီးပျက်သွားတဲ့အခါ (ဓါတ်လှေကားထဲမှာအလိုလျောက်မီးလင်းတဲ့စနစ်မပါဘူးဆိုကြပါစို့) အရေးပေါ်ခေါ်တဲ့တယ်လီဖုန်းကို ရအောင်ယူနိုင်ရပါမယ်။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးစမ်းကြည့်ဖူးတဲ့သူဆိုရင်တုန်လှုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာ အဓိကသင်ခန်းစာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက မှတ်ဥာဏ်ကို လေ့ကျင့်တာ။ ဒုတိယတစ်ချက်က စိန်ခေါ်မှုကို တုန့်ပြန်တာ။ သင့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုကန့်သတ်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ်ပေါက်လာ တဲ့စိန်ခေါ်မှုကို ကြောက်ရွံ့မှုမှကျော်လွှားနိုင်ရန်၊ အကောင်းဆုံးတုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းမြင့်တက်လာစေရန် ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပါပဲ။ ဆိုပါစို့။ ထမင်းစားပွဲမှာ မစားခင် ဘယ်ဟင်းကဘယ်နေရာ ဘယ်ပန်းကန်က ဘယ်နေရာ၊ ဇွန်းနဲ့ခက်ရင်းကဘယ်နေရာ စသည်ဖြင့် တစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်လောက် မှတ်မိအောင်ကြည့်၊ ပြီးရင်မျက်လုံးမှိတ်(သို့)စည်းပြီးစားကြည့်ပါ။ဒါဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပေါ့။ ဘေးကလှောင်မယ့်သူတွေမရှိအောင်တော့ကြိုစီစဉ်ထားရပါလိမ့်မယ်။
၄။ နေ့စဉ်သုံးနေကျပစ္စည်းတစ်ခုကို သုံးရိုးသုံးစဉ်မဟုတ်ဘဲ ဘယ်လိုမျိုးအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာတီထွင် ကြည့်ပါ။ ရေခွက်တစ်ခုရဲ့မူလအသုံးက ရေသောက်ဖို့ပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့်သူ့ကို တခြားဘာတွေအတွက်သုံးနိုင်သေးလဲ။
ဥပမာ ခွက်လှလှလေးကို ရုံးမှာ ခဲတံတွေ၊ဘောပင်တွေထည့်တဲ့ခွက်အဖြစ်သုံးနိုင်တယ်။ အိမ်ခန်းတွင်းအလှဆင်ဖို့အတွက် ပန်းအိုးသေးသေးကလေးအဖြစ်သုံးနိုင်တယ်။ နောက်ဘာတွေများသုံးနိုင်သေးသလဲ စဉ်းစားရင်စဉ်းစားသလောက်နည်းလမ်းတွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ သင်နေ့စဉ်သုံးနေကျသွားတိုက်ဆေးကို လက်အနံ့အသက်ပျောက်အောင် ဆပ်ပြာလိုမျိုးအသုံးပြုနိုင်မယ်မထင်ဘူးလား။ ပိုးမွှားလေးတွေကိုက်လို့ယားယံတဲ့အခါဆေးအဖြစ်လိမ်းနိုင်တယ်လို့မထင်ဘူးလား။
၅။ ကိုယ့်ယူဆချက်တွေကိုပြောင်းပြန်လှန်ကြည့်ပါ။ Reverse your Assumption
Assumption reversal ဆိုသည်မှာ ဦးနှောက်ဘယ်ဖက်ခြမ်းအသုံးပြုတဲ့ စိတ်ကူးသစ်၊ အတွေးအခေါ်သစ်၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုအသစ်တွေ ပြုလုပ်ရာမှာအင်မတန်အသုံးဝင်သည့်နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသမရိုးကျစဉ်းစားပုံကနေဖောက်ထွက်ပစ်လိုက်တဲ့ ထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေပေါ်ထွက်ရာရင်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ဖို့ကတော့ ကိုယ်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခု၊ လိုလားချက်တစ်ခုကို ချရေးကြည့်ပါ။ ပြီးလျှင် ၄င်းပြဿနာအပေါ်မှာ မိမိရဲ့ဖြေရှင်းဖို့ယူဆချက်များစိတ်ထဲပေါ်လာရာချရေးပါ။ အယူအဆတို့မှာ ဘယ်လောက်ကလေးကလားဆန်နေ၊ မဖြစ်နိုင်ပါစေကိစ္စမရှိပါ။ ၄င်းယူဆချက်များထဲမှတစ်ခုကိုကျပန်းယူပြီုးပြောင်းပြန်လှန်ရေးကြည့်ပါ။
ဥပမာ ၁။ လူနာများသည် ----------- သို့သွားကြသည်။
ယူဆချက် ၁။ -- လူနာများသည် ဆေးရုံသို့သွားကြသည်။
ပြောင်းပြန်ယူဆချက် ၁။ -- ဆေးရုံများသည် လူနာများထံသို့သွားကြသည်။
ထိုပြောင်းပြန်ယူဆချက်မှ ဘယ်လိုအရာတွေတီထွင်နိုင်မလဲဟုစဉ်းစားကြရင်းမှ ယခု နယ်စည်းမခြားဆေးရုံများ “Hospitals without wall” ဟုခေါ်သည့်အိမ်တိုင်ယာရောက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းများအင်မတန်ခေတ်စားလာခဲ့သည်မှာအတော်ပင်ကြာခဲ့ပါပြီ။
နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့ စားသောက်ဆိုင်ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖွင့်မည်ဆိုပါစို့။ ဘယ်လိုဆန်းသစ်တဲ့စားသောက်ဆိုင်မျိုးဖြစ်လာအောင်တီထွင်ကြည့်မည်လဲ။
ဥပမာ ၂။ စားသောက်ဆိုင်တွင် ------- ရှိသည်။
ယူဆချက် ၁။ -- စားသောက်ဆိုင်တွင် စားဖိုမှူးရှိသည်။
ပြောင်းပြန်ယူဆချက် ၁။ -- စားသောက်ဆိုင်တွင် စားဖိုမှူးမရှိပါ။ (လာရောက်စားသောက်သူများမှ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားသောက်နိုင်မည့် ပျော်ပွဲစား စားသောက်ဆိုင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။)
ဤမျှလောက်ဖတ်လာခဲ့ပြီဆိုလျှင်ပင် မိတ်ဆွေရဲ့ဦးနှောက်ကို တော်တော်အလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများမှာ သမရိုးကျစဉ်းစားဖို့သာတွန်းအားပေးခံခဲ့ရသည်မှာ ၀မ်းနည်းစရာသမိုင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်သည့် သမရိုးကျမှဖယ်ကျဉ်သည့်အရာများကို နင်းခြေဖျက်စီးမောင်းထုတ်ခံရသည်။ နောက်တစ်ခါထိုသို့မပြုမူရဲအောင်အကြောက်တရားများအားသင်ကြားပေးခံခဲ့ရသည်။ ထိုအရာအားလုံး၏အခြေခံတရားမှာ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှပညာသင်ကြားရေးစနစ်ပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်လွန်အံ့မထင်။ ဒါကျက်။ ဒီလိုဖြေ။ ဒီဘောင်ထဲဝင်မှအမှတ်ပေးမည် ဆိုသည့်ဘောင်အတွင်းမှကျော်၍စဉ်းစားခွင့်မပေးခဲ့သည့်စနစ်။ အောင်ချက်ကောင်းရေးဆိုသည့်ပန်းတိုင်အောက်မှာကျောင်းသားလူငယ်တို့သာမက ဆရာဆရာမများ၏ဘ၀တွေပါလှောင်ပိတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲသည်သာ လူတစ်ယောက်ရဲ့အနာဂါတ်ကိုပြဠာန်းပေးနိုင်သည့် phobia ကြီးက ကလေးငယ်တို့သာမက အုပ်ထိမ်းသူမိဘတို့ကိုပါဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီ၍အကြီးအကျယ်စွဲကပ်လာသောအခါ မြန်မာ့အနာဂါတ်အတွက်ဦးနှောက်ကလေးများသည်လည်းမသုံးဘဲပစ်ထားခံရသည့် သံချေးတက်ဓါးလေးများသဖွယ်ဖြစ်လာခဲ့ချေပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်နှင့်အနီးဆုံးမှာရှိနေသည့် ဓါးကလေးများကို တစ်လက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သံချေးချွတ်ဖို့အားထုတ်မိနေသူတစ်ယောက်မျှသာဖြစ်ပါတော့သည်။
ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားလာမိတယ်။ နည်းလမ်းတွေက တစ်ရာကျော်မှာ တစ်ထိုင်တည်းရေးဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် နည်းလမ်းငါးခုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးလေ့လာကာရေးပေးပါဦးမယ်။
ကြှနျတျောတို့အားလုံးကံကောငျးကွပါတယျ။ သငျဤစာကိုဖတျနနေိုငျပါက သငျလညျးကံကောငျးသညျ့အထဲတှငျပါပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့အားလုံးမှာ ပုံမှနျအလုပျလုပျနိုငျသညျ့ဦးနှောကျတဈစုံကိုပိုငျဆိုငျထားလို့ပါပဲ။ ဒီဦးနှောကျကိုအသုံးပွုပွီး ကြှနျတျောတို့ဘဝတကျလမျးရှာကွရပါသညျ။ ပွဿနာတှဖွေရှေငျးရသညျ။ မှတျသားစရာတှမှေတျကွသညျ။ ပွောငျမွောကျသညျ့အနုပညာလကျရာတှေ၊ သီခငျြးတှေ၊ တီထှငျဖနျတီးမှုတှေ ကမ်ဘာကွီးအားရိုကျခတျလှမျးမိုးသညျ့အတှေးအချေါတှအေားလုံးဟာ သညျလူသားဦးနှောကျကိုအသုံးပွုပွီး ထှကျပျေါလာကွသညျ။
တဈခြိနျတုနျးကထငျထားခဲ့သညျကအရှယျရောကျပွီးလူတဈယောကျရဲ့ဦးနှောကျဟာအပွညျ့အစုံဖှံ့ဖွိုးပွီးဖွဈလို့နောကျထပျဖှံ့ဖွိုးမှုမရှိတော့ဘူးဟူ၍ဖွဈသညျ။ ဒါပမေယျ့နောကျပိုငျးတှရှေိ့ခကျြမြားအရ ဉာဏျကစားရတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတှဟော ဦးနှောကျရဲ့ တညျဆောကျပုံနဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှကေို ပွောငျးလဲနိုငျကွောငျးညှနျပွနကွေပါတယျ။ မသုံးဘဲကွာလာလြှငျ သံခြေးတကျလာတဲ့ဓါးလို ဦးနှာကျဟာလဲသုံးလလေေ ထကျမွကျလာလလေသေဘောရှိပါတယျ။ အမြားတကာသိပွီးသား ဟာသလို ဦးနှောကျတှတေနျးစီပွီးရောငျးတဲ့နရောမှာ တို့မွနျမာဦးနှောကျက ဈေးအကွီးဆုံး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ တဈခါမှမသုံးရသေးတဲ့အသဈစကျစကျမို့တဲ့လေ။ အာရုံကွော သုတသေနလောကမှာခတျေစားတဲ့ use it or loose it သုံးရငျသုံး၊ မသုံးရငျ ဆုံး ဆိုတဲ့သီအိုရီကလညျး ဒါကိုထောကျခံပေးထားပါတယျ။
လူအမြားစုကွီးကတော့ဦးနှောကျသုံးရမှာဝနျလေးတတျပါတယျ။ ကြောငျးသားဘဝမှာ စာကကျြရမယျ၊ သင်ျခြာတှကျရမယျ၊ စာစီစာကုံးရေးရမယျဆိုရငျ မလုပျခငျြကွပါဘူး။ ရတေဈတိုငျကီသှားထမျးဆိုထမျးလိုကျခငျြတယျ။ တဈအိမျလုံးတံမကျြစညျးလှညျးဆိုရငျလှညျးလိုကျခငျြတယျ။ စာမလုပျခငျြကွပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ဦးနှောကျကိုအသုံးပွုရတာဟာ ကာယကိုအသုံးပွုရတာထကျပငျပနျးလို့ပါပဲ။ တဈနာရီနှဈနာရီလောကျ ထိုငျပွီး စိတျကို တဈစုံတဈရာထဲမှာနှဈမွှုပျခြုပျနှောငျထားရတာ အငျမတနျပငျပနျးတယျလို့ထငျကွပါတယျ။ တကယျတော့ ဒါဟာကြှနျတျောတို့ရဲ့ကွောကျစိတျကွောငျ့ပါ။ အလုပျတဈခုကိုမလုပျရသေးဘဲနဲ့ စိတျကကွိုတငျပွီး ပငျပနျးမှာ၊ ကရြှုံးမှာ စတာတှကေိုပူပနျနတေတျလို့ပါပဲ။
Virgil Garnett Thomson ဆိုတဲ့ပုဂ်ဂိုလျက ကိုယျမလုပျဖူးတဲ့အရာတဈခုကိုအနညျးဆုံးသုံးကွိမျတော့ စမျးကွညျ့ပါလို့ပွောတယျ။ “အဲဒီအလုပျကိုလုပျရမှာကွောကျတဲ့စိတျကိုကြျောလှားနိုငျဖို့ပထမဦးဆုံးအကွိမျစမျးလုပျကွညျ့ပါ။ ။ ဒုတိယအကွိမျစမျးလုပျကွညျ့တာကတော့ အဲဒါကို ဘယျလိုလုပျရသလဲဆိုတာသိအောငျပါ။ တတိယအကွိမျလုပျရငျတော့ အဲဒါကို ကိုယျရရှေညျနှဈသကျနိုငျမှုရှိမရှိသိအောငျလို့လုပျပါ” တဲ့။ ဒီစကားလေးဟာ ကြှနျတျောလူငယျဘဝကအဖွဈအပကျြတဈခုကိုသှားသတိရစပေါတယျ။ တိုကျခေါငျမိုးပျေါမှာ ပနျးရံအလုပျသမားတှနေပေူကွီးထဲလုပျနကွေတာပူလိုကျမယျ့ဖွဈခငျြးလို့တှေးမိတယျ။ ကိုယျကအရိပျထဲကနပွေီးစဉျးစားမိနတောကိုး။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျတဈကယျလကျတှဝေ့ငျလုပျရတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယျထငျသလောကျမပူဘူး ဆိုတာနားလညျလာခဲ့တယျ။ နရေောငျအောကျကိုဝငျစအခြိနျမှာသာ အပူဒဏျကိုပွငျးပွငျးခံစားရပမေယျ့ ကွာလာတဲ့အခါ ခံနိုငျရတေကျလာပါတယျ။ အလုပျထဲစိတျရောကျသှားတဲ့အခါ ပူလို့ပူမှနျးတောငျသတိမရတော့ပါဘူ။
ဦးနှောကျကိုသုံးပွီးအလုပျလုပျမယျ့ကြောငျးသားကြောငျးသူမြားအတှကျ ဦးနှောကျကိုစှမျးရညျတိုးမွှငျ့နိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ ငှကေုနျကွေးကစြရာမလိုဘူး။ အနညျးဆုံးတော့ အခုဖျောပွသှားမယျ့ အလအေ့ထလေးမြားဟာ သငျ့ရဲ့ ပငျြးရိနတေဲ့စိတျ၊ သမရိုးကြ ငွီးငှဖှေ့ယျဘဝနနေညျးထဲ ခဏတဖွုတျလှတျမွောကျသှားစမေယျဆိုရငျတောငျအမွတျပါပဲလေ။ ကြှနျတျောတော့ အခုပဲစပွီးစမျးကွညျ့နပေါပွီ။
၁။ ပဟဠေိနှငျ့ဉာဏျစမျးမေးခှနျးမြားဖွပေါ။ ဒီဥပမာကတော့လူတိုငျးသိပွီးသားပါ။ ဒါကွောငျ့သူတို့ကို brainteasers လို့ချေါတာပေါ့။
၂။ လကျနှဈဖကျလုံးအသုံးပွုနိုငျစှမျးကိုပြိုးထောငျပါ။ ကိုယျမသနျတဲ့လကျနဲ့ သှားတိုကျတာ၊ ဆံပငျဖွီးတာ စတာတို့လုပျကွညျ့ပါ။ ဇှနျးခကျရငျးကိုငျတဲ့အခါ ညာသနျကဘယျသနျလိုပွောငျးကိုငျကွညျ့ပါ။
၃။ မရရောခွငျးကိုခံယူပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ ဝိရောဓိတှေ paradox နဲ့ အမွငျအာရုံလှညျ့စားတတျတဲ့အရာတှေ optical illusion တှကေိုနှဈသကျနိုငျအောငျသငျယူပါ။ စာဖတျသူလကျတှစေ့မျးကွညျ့လို့ရအောငျအောကျပါ ဝိရောဓိလေး (liar paradox) ကိုစဉျးစားကွညျ့ပါ။
တဈစုံတဈယောကျက “ကြှနျတျောအမွဲတမျးလိမျပွောတတျပါတယျ” လို့ဆိုလာရငျ သူတဈကယျ အမှနျတရားကို ပွောနတောလား။ လိမျပွောနတောလား။ သငျဘယျလိုဆုံးဖွတျမလဲ။
နောကျတဈခုက Archer's paradox လို့ချေါပါတယျ။ “လေးသညျတျောတဈဦးသညျ ပဈမှတျကိုထိမှနျအောငျပဈဖို့ဆိုပါက ပဈမှတျတညျ့တညျ့ကိုခြိနျ၍မရ။ ပဈမှတျ၏ဘေးဘကျနညျးနညျးရှခြေိ့နျရ၏”။ မွနျမာစကားပုံ “ဒူးလောကျတငျမှရငျလောကျကြ”ဆိုတာ ဒီဝိရောဓိနဲ့တဈထပျတညျးပါပဲ။ သမရိုးကကြိုးကွောငျးဆငျခွငျမယျဆိုရငျတော့ ပဈမှတျကိုတညျ့အောငျခြိနျမှထိမှာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ရူပဗဒေသဘောတရားတှေ၊ လတေိုကျခတျနှုနျး စတာတှနေဲ့စဉျးစားမယျဆိုရငျမှနျနတောတှရေ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ဒီလိုဝိရောဓိတှကေို ဘာကွောငျ့ ဆိုတာစဉျးစားကွညျ့ခွငျးဟာ ဦးနှောကျအတှကျအမြားကွီးအကြိုးရှိစပေါတယျ။ optical illusion ကလညျး မကျြလုံးကမွငျရတာဟာအမွဲတမျးအမှနျတရားမဟုတျတတျဘူးဆိုတာကို ကြှနျတျောတို့တတှအေမွဲတမျးအမှတျရနအေောငျပညာပေးနပွေနျပါတယျ။
ရှဈတနျးမှာကတညျးက The standard Hering illusion (1861) ကိုကြှနျတျောတို့သိခဲ့ကွပါပွီ။
သူ့နောကျကှယျကဘာကွောငျ့ ဆိုတဲ့အကွောငျးတရားကို ဆငျခွငျသုံးသပျနိုငျတဲ့အခါ ဦးနှောကျသနျစှမျးမှထကျမကျြမှ မကျြလုံးကပွောတဲ့အာရုံမှားတှကေိုခဖြေကျြနိုငျမှာဖွဈကွောငျးပိုခိုငျလုံလာပါတယျ။
၃။ သငျ့အာရုံငါးပါးထဲက တဈခုခုကို ပိတျဆို့ကာအလုပျလုပျကွညျ့ပါ။ ဥပမာ မကျြလုံးကိုအဝတျစဖွငျ့စညျးကာထမငျးစားကွညျ့ခွငျး၊ နားထဲဂှမျးဆို့ထားခွငျး၊ မကျြလုံးပိတျပွီးရခြေိုးခွငျး။ စဉျးစားကွညျ့ရငျတော့ခပျကွောငျကွောငျ အရမေရအဖတျမရအလုပျတှလေို့ထငျရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ညဖကျရခြေိုးနရေငျး ရခြေိုးခနျးမီးကို အပွငျကတဈယောကျယောကျက ပိတျသှားတာမြိုးကွုံဖူးကွပါသလား။ မီးမှောငျမှောငျထဲမှာ စမျးတဝါးဝါးနဲ့ တဈကိုယျလုံးမကျြနှာမှာပါ ဆပျပွာတိုကျထားရငျး ရခှေကျ(သို့) ရပေနျးခလုပျကို လိုကျရှာရတာဘယျလိုနပေါသလဲ။ ပိုအရေးကွီးတဲ့ဥပမာပွရရငျ ဓါတျလှကေားစီးရငျးမီးပကျြသှားတဲ့အခါ (ဓါတျလှကေားထဲမှာအလိုလြောကျမီးလငျးတဲ့စနဈမပါဘူးဆိုကွပါစို့) အရေးပျေါချေါတဲ့တယျလီဖုနျးကို ရအောငျယူနိုငျရပါမယျ။ ဒီလိုအခါမြိုးမှာ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးလေးစမျးကွညျ့ဖူးတဲ့သူဆိုရငျတုနျလှုပျစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးမှာ အဓိကသငျခနျးစာနှဈခုရှိပါတယျ။ ပထမတဈခုက မှတျဉာဏျကို လကေ့ငျြ့တာ။ ဒုတိယတဈခကျြက စိနျချေါမှုကို တုနျ့ပွနျတာ။ သငျ့ရဲ့စှမျးရညျတှကေိုကနျ့သတျခံထားရတဲ့အခွအေနမြေိုးမှာပျေါပေါကျလာ တဲ့စိနျချေါမှုကို ကွောကျရှံ့မှုမှကြျောလှားနိုငျရနျ၊ အကောငျးဆုံးတုနျ့ပွနျနိုငျစှမျးမွငျ့တကျလာစရေနျ ဆိုတဲ့အခကျြနှဈခကျြပါပဲ။ ဆိုပါစို့။ ထမငျးစားပှဲမှာ မစားခငျ ဘယျဟငျးကဘယျနရော ဘယျပနျးကနျက ဘယျနရော၊ ဇှနျးနဲ့ခကျရငျးကဘယျနရော စသညျဖွငျ့ တဈမိနဈနှဈမိနဈလောကျ မှတျမိအောငျကွညျ့၊ ပွီးရငျမကျြလုံးမှိတျ(သို့)စညျးပွီးစားကွညျ့ပါ။ဒါဟာစိနျချေါမှုတဈခုပေါ့။ ဘေးကလှောငျမယျ့သူတှမေရှိအောငျတော့ကွိုစီစဉျထားရပါလိမျ့မယျ။
၄။ နစေ့ဉျသုံးနကေပြစ်စညျးတဈခုကို သုံးရိုးသုံးစဉျမဟုတျဘဲ ဘယျလိုမြိုးအသုံးခနြိုငျမလဲဆိုတာတီထှငျ ကွညျ့ပါ။ ရခှေကျတဈခုရဲ့မူလအသုံးက ရသေောကျဖို့ပဲပေါ့။ ဒါပမေယျ့သူ့ကို တခွားဘာတှအေတှကျသုံးနိုငျသေးလဲ။
ဥပမာ ခှကျလှလှလေးကို ရုံးမှာ ခဲတံတှေ၊ဘောပငျတှထေညျ့တဲ့ခှကျအဖွဈသုံးနိုငျတယျ။ အိမျခနျးတှငျးအလှဆငျဖို့အတှကျ ပနျးအိုးသေးသေးကလေးအဖွဈသုံးနိုငျတယျ။ နောကျဘာတှမြေားသုံးနိုငျသေးသလဲ စဉျးစားရငျစဉျးစားသလောကျနညျးလမျးတှထှေကျလာနိုငျပါတယျ။ သငျနစေ့ဉျသုံးနကေသြှားတိုကျဆေးကို လကျအနံ့အသကျပြောကျအောငျ ဆပျပွာလိုမြိုးအသုံးပွုနိုငျမယျမထငျဘူးလား။ ပိုးမှားလေးတှကေိုကျလို့ယားယံတဲ့အခါဆေးအဖွဈလိမျးနိုငျတယျလို့မထငျဘူးလား။
၅။ ကိုယျ့ယူဆခကျြတှကေိုပွောငျးပွနျလှနျကွညျ့ပါ။ Reverse your Assumption
Assumption reversal ဆိုသညျမှာ ဦးနှောကျဘယျဖကျခွမျးအသုံးပွုတဲ့ စိတျကူးသဈ၊ အတှေးအချေါသဈ၊ တီထှငျဖနျတီးမှုအသဈတှေ ပွုလုပျရာမှာအငျမတနျအသုံးဝငျသညျ့နညျးစနဈတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာသမရိုးကစြဉျးစားပုံကနဖေောကျထှကျပဈလိုကျတဲ့ ထူးခွားတဲ့စိတျကူးစိတျသနျးတှပေျေါထှကျရာရငျးမွဈဖွဈပါတယျ။ လကျတှလေု့ပျကွညျ့ဖို့ကတော့ ကိုယျလကျရှိကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ပွဿနာတဈခု၊ လိုလားခကျြတဈခုကို ခရြေးကွညျ့ပါ။ ပွီးလြှငျ ၎င်းငျးပွဿနာအပျေါမှာ မိမိရဲ့ဖွရှေငျးဖို့ယူဆခကျြမြားစိတျထဲပျေါလာရာခရြေးပါ။ အယူအဆတို့မှာ ဘယျလောကျကလေးကလားဆနျနေ၊ မဖွဈနိုငျပါစကေိစ်စမရှိပါ။ ၎င်းငျးယူဆခကျြမြားထဲမှတဈခုကိုကပြနျးယူပွီုးပွောငျးပွနျလှနျရေးကွညျ့ပါ။
ဥပမာ ၁။ လူနာမြားသညျ ----------- သို့သှားကွသညျ။
ယူဆခကျြ ၁။ -- လူနာမြားသညျ ဆေးရုံသို့သှားကွသညျ။
ပွောငျးပွနျယူဆခကျြ ၁။ -- ဆေးရုံမြားသညျ လူနာမြားထံသို့သှားကွသညျ။
ထိုပွောငျးပွနျယူဆခကျြမှ ဘယျလိုအရာတှတေီထှငျနိုငျမလဲဟုစဉျးစားကွရငျးမှ ယခု နယျစညျးမခွားဆေးရုံမြား “Hospitals without wall” ဟုချေါသညျ့အိမျတိုငျယာရောကျကနျြးမာရေးဝနျဆောငျမှုပေးသညျ့လုပျငနျးမြားအငျမတနျခတျေစားလာခဲ့သညျမှာအတျောပငျကွာခဲ့ပါပွီ။
နောကျဥပမာတဈခုကတော့ စားသောကျဆိုငျဥပမာဖွဈပါတယျ။ စားသောကျဆိုငျတဈခုဖှငျ့မညျဆိုပါစို့။ ဘယျလိုဆနျးသဈတဲ့စားသောကျဆိုငျမြိုးဖွဈလာအောငျတီထှငျကွညျ့မညျလဲ။
ဥပမာ ၂။ စားသောကျဆိုငျတှငျ ------- ရှိသညျ။
ယူဆခကျြ ၁။ -- စားသောကျဆိုငျတှငျ စားဖိုမှူးရှိသညျ။
ပွောငျးပွနျယူဆခကျြ ၁။ -- စားသောကျဆိုငျတှငျ စားဖိုမှူးမရှိပါ။ (လာရောကျစားသောကျသူမြားမှ ကိုယျတိုငျခကျြပွုတျစားသောကျနိုငျမညျ့ ပြျောပှဲစား စားသောကျဆိုငျပုံစံမြိုးဖွဈနိုငျသညျ။)
ဤမြှလောကျဖတျလာခဲ့ပွီဆိုလြှငျပငျ မိတျဆှရေဲ့ဦးနှောကျကို တျောတျောအလုပျပေးခဲ့ပွီးဖွဈသညျ။
ကြှနျတျောတို့မွနျမာပွညျသူပွညျသားမြားမှာ သမရိုးကစြဉျးစားဖို့သာတှနျးအားပေးခံခဲ့ရသညျမှာ ဝမျးနညျးစရာသမိုငျးတဈခုပငျဖွဈသညျ။ ဆနျးသဈတီထှငျသညျ့ သမရိုးကမြှဖယျကဉျြသညျ့အရာမြားကို နငျးခွဖေကျြစီးမောငျးထုတျခံရသညျ။ နောကျတဈခါထိုသို့မပွုမူရဲအောငျအကွောကျတရားမြားအားသငျကွားပေးခံခဲ့ရသညျ။ ထိုအရာအားလုံး၏အခွခေံတရားမှာ အာဏာရှငျစနဈအောကျမှပညာသငျကွားရေးစနဈပငျဖွဈသညျဟုဆိုလြှငျလှနျအံ့မထငျ။ ဒါကကျြ။ ဒီလိုဖွေ။ ဒီဘောငျထဲဝငျမှအမှတျပေးမညျ ဆိုသညျ့ဘောငျအတှငျးမှကြျော၍စဉျးစားခှငျ့မပေးခဲ့သညျ့စနဈ။ အောငျခကျြကောငျးရေးဆိုသညျ့ပနျးတိုငျအောကျမှာကြောငျးသားလူငယျတို့သာမက ဆရာဆရာမမြား၏ဘဝတှပေါလှောငျပိတျခံခဲ့ရသညျ။ ဆယျတနျးစာမေးပှဲသညျသာ လူတဈယောကျရဲ့အနာဂါတျကိုပွဠာနျးပေးနိုငျသညျ့ phobia ကွီးက ကလေးငယျတို့သာမက အုပျထိမျးသူမိဘတို့ကိုပါဆယျစုနှဈနှငျ့ခြီ၍အကွီးအကယျြစှဲကပျလာသောအခါ မွနျမာ့အနာဂါတျအတှကျဦးနှောကျကလေးမြားသညျလညျးမသုံးဘဲပဈထားခံရသညျ့ သံခြေးတကျဓါးလေးမြားသဖှယျဖွဈလာခဲ့ခပြွေီ။ ကြှနျတျောကတော့ ကိုယျနှငျ့အနီးဆုံးမှာရှိနသေညျ့ ဓါးကလေးမြားကို တဈလကျပဲဖွဈဖွဈ သံခြေးခြှတျဖို့အားထုတျမိနသေူတဈယောကျမြှသာဖွဈပါတော့သညျ။
ရေးရငျးရေးရငျးနဲ့ကြှနျတျောလညျးတျောတျောစိတျဝငျစားလာမိတယျ။ နညျးလမျးတှကေ တဈရာကြျောမှာ တဈထိုငျတညျးရေးဖို့ဘယျလိုမှမဖွဈနိုငျတဲ့အတှကျ နညျးလမျးငါးခုမိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဆကျပွီးလလေ့ာကာရေးပေးပါဦးမယျ။
197 members like this
Permalink Reply by may zun on November 10, 2015 at 11:49
Permalink Reply by nyisa on November 10, 2015 at 21:08
Permalink Reply by swanyeehtet on November 10, 2015 at 21:33
thank u million for ur sharing:)
Permalink Reply by PyaePhyo Kyaw on November 11, 2015 at 9:03
Thank you sir.It`s so fascinating...........
Permalink Reply by may nwe oo on November 11, 2015 at 9:54
Permalink Reply by Henry Sai on November 11, 2015 at 13:01
Permalink Reply by THET NAING OO on November 11, 2015 at 13:09
Permalink Reply by Yae Wint Ko Ko on January 19, 2019 at 11:48
နံပါတ် ၃ က နှစ်ခါထပ်နေတော့
အားလုံး၅ချက်မဟုတ်ပဲ ၆ချက်မဟုတ်ဖူးလား ???
Permalink Reply by pwintphyuthi on February 28, 2019 at 3:03